Jude Bellingham Oo Ka Jawaabay Inuu Doonayo Ku Biirista Kooxda Liverpool
HomeWararka CiyaarahaJude Bellingham oo ka Jawaabay inuu Doonayo ku biirista Kooxda Liverpool
November 2, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Dortmund Jude Bellingham ayaa hoos u dhigay wararka sheegaya inuu doonayo inuu u wareego Liverpool .
Xidigii hore ee khadka dhexe ee Premier League Craig Hignett ayaa dhawaan sheegay in u dhaqaaqida Anfield ee 18 jirkan ay tahay mid dhow.
Isagoo la hadlayay BBC Radio Merseyside isagoo sii maraya xanta suuqa ee LFC , Hignett wuxuu yiri: “Waxaan u maleynayaa inaan ku maqlay awood wanaagsan mana sheegi karo halka aan ka maqlay, laakiin sida muuqata wuxuu sheegay inuu ku xiran yahay Liverpool.
“Haddii ay taasi tahay Janaayo ama in uu yahay dhamaadka xilli ciyaareedka weli lama hubo, laakiin waxaan qabaa, waxaan ku leeyahay awood wanaagsan inay ku dhowdahay.”
Da’yarka ayaa xoojiyay booskiisa kooxda koowaad ee Dortmund xilli ciyaareedkan, isagoo ku soo bilowday dhammaan 16-kii kulan ee uu u saftay kooxda Jarmalka tartamada oo dhan.
Liverpool, Manchester United iyo Chelsea ayaa dhamaantood loo aqoonsaday inay xiiseynayaan ciyaaryahanka ku dhashay Birmingham, kaasoo ay Dortmund ku qiimeyso 101 milyan ginni